ओलीपक्षीयहरुको जुम भेला : जबजको पक्षमा माहोल बनाउन निर्देशन - २० कार्तिक २०७७, NepalTimes
काठमाडौँ : पदीय भागबन्डा नमिलेर मूल नेतृत्वबीच नै पार्टी फुट्ने र फुटाउने आपसी धाकधम्की चलिरहेका बेला नेकपामा थाती रहेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ को बहस ब्युँतिएको छ । त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रदेश १ बाट गरेका छन् ।
उनले जनताको जनवाद अल्पकालीन कार्यक्रम मात्रै भएको र त्यसको अन्तरवस्तुमा जबज नै रहेको बताएका थिए । ‘मदन भण्डारीका विचारहरूको योगदानबारे देशभरका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू र आम जनतालाई बुझाउने कर्तव्य हाम्र्रै हो । त्यो कर्तव्यबाट किञ्चित रूपले मात्रै पनि हामी पछि पर्ने छैनौं । त्यसमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले अगुवाइ गरेर काम गरोस् । त्यसमा साथीहरू पनि सहभागी हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘भण्डारीका विचार के हुन् ? जनताको बहुदलीय जनवादले भन्न खोजेको कुरा के हो ? मदन भण्डारीले देशलाई पुर्‍याउनुभएको योगदान के हो ? यो कुरा हामी बताउनेछौं । यो बताउने कुरालाई कसैले पनि रोकछेक गर्न सक्दैन । यस किसिमको योजना बनाएर फाउन्डेसन अघि बढोस् ।’
बैठकमा सहभागी प्रदेश १ का ओली पक्षीय नेताहरूमध्ये १७ जनाले विचार राखेका थिए । तीमध्ये कतिपयले पार्टी एकता नै गलत भएको तर्क गरेका थिए । त्यसमा जवाफ दिँदै पोखरेलले देशभरिका कार्यकर्ता र जनताको चाहना तथा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन एकता गरिएको स्पष्ट पारे । ‘एकता गरिरहँदा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यूको बलियो सरकार बनाएर जनताको पक्षमा काम गर्न सकियोस् भन्ने थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर अरू कतिपय गुमेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त होस् भन्ने भित्री चाहनाका कारण पार्टी एकताका लागि तयार भएका हुन सक्छन्, कुण्ठाग्रस्त मानसिकता बोकेका नेतृत्व तहका मान्छेलाई एकता भए आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ ।’,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।